Union Minister U Kyaw Tint Swe inaugurates Myanmar Embassy in Havana – Ministry of Foreign Affairs
Union Minister U Kyaw Tint Swe inaugurates Myanmar Embassy in Havana
Union Minister for the Office of the State Counsellor of Myanmar U Kyaw Tint Swe as Special Envoy of the Government of the Republic of the Union of Myanmar paid an official visit to the Republic of Cuba from2to5October 2019.
During the visit, he called on Mr. Roberto Morales Ojeda, Vice President of the Councils of State and Ministers of the Republic of Cuba at the Palace of the Revolution on3October and had the meetings with Mr. Jose Angel Portal Miranda, Minister of Public Health of Cuba, and Mr. Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla, Minister of Foreign Affairs of Cuba, at their offices on3October and4October, respectively.
At the meeting with the Vice-President, they cordially discussed matters pertaining to the political and economic developments in Myanmar and Cuba and promotion of bilateral relations and cooperation between the two countries especially in the area of health. The Union Minister also informed the Vice-President that after his visit to Cuba last year, the Embassy of Myanmar has recently been established in Havana and the launch of the Myanmar Embassy establishment would take place on4October 2019.
The Union Minister and the Minister of Public Health discussed ways and opportunities to enhance cooperation in health sector, particularly in the areas of pharmaceutical industry, human resource development and research. At the meeting with the Minister of Foreign Affairs, the two Ministers exchanged views on further consolidating the traditional ties of friendly relations and cooperation, promoting trade and economic cooperation between the two countries as well as in the health sector, enhancing contacts between Myanmar and Cuba and the Myanmar Government’s efforts to achieve peace, stability and national reconciliation in Rakhine State. He expressed his appreciation to the Minister and officials of the Ministry of Foreign Affairs of Cuba for their support in establishing Myanmar Embassy in Havana.
In the evening of4October 2019, the Union Minister attended the reception to launch the official establishment of Myanmar Embassy in Havana and gave remarks. In his remarks, he stressed that the establishment of Myanmar Embassy reflects the importance of how Myanmar attached her relationship with Cuba and signifies wide opening of windows of opportunities for promotion of bilateral cooperation, trade and investment between the two countries. Mr. Rogelio Sierra Diaz, Deputy Minister of Foreign Affairs of Cuba also delivered remarks. Officials from the Ministry of Foreign Affairs of Cuba and Ambassadors and Heads of Missions of ASEAN member countries and diplomatic corps in Havana attended the event.
The establishment of Myanmar Embassy in Havana will further consolidate the relations and cooperation between the two countries as well as promoting cooperation with the countries in the Caribbean region.
The Union Minister and the delegation left Havana on5October 2019.
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ ကျူးဘားသမ္မတနိုင်ငံသို့ တရားဝင်ခရီးသွားရောက်၊ ကျူးဘားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးဖွင့်လှစ်မှု အခမ်းအနားကျင်းပ
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေသည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၂-၁၀-၂၀၁၉ ရက်မှ ၅-၁၀-၂၀၁၉ ရက်အထိ ကျူးဘားနိုင်ငံသို့ တရားဝင်ခရီးစဉ် သွားရောက်ခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ခရီးစဉ်အတွင်း ၃-၁၀-၂၀၁၉ ရက်တွင် ကျူးဘားနိုင်ငံ ဒုတိယသမ္မတ Mr. Roberto Morales Ojeda နှင့်လည်းကောင်း၊ ကျူးဘားနိုင်ငံ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး Mr. Jose Angel Portal Miranda နှင့်လည်းကောင်း သီးခြားစီ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၄-၁၀-၂၀၁၉ ရက်တွင် ကျူးဘားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဒုတိယသမ္မတ Mr. Roberto Morales Ojeda နှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံအကြား နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံ အကြား ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်သွားမည့် ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ကျူးဘားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးအား ၄-၁၀-၂၀၁၉ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးခဲ့ပါသည်။
ကျူးဘားနိုင်ငံ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး Mr. Jose Angel Portal Miranda နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံအကြား ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး၊ လူ့အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ သည်။ ကျူးဘားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ-ကျူးဘား နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် ပိုမို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေး၊ နှစ်ဖက်ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှုမြှင့်တင်သွားရေး၊ မြန်မာအစိုးရမှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် ကျူးဘားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ကျူးဘားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့မှုများ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ၄-၁၀-၂၀၁၉ ရက်၊ ညနေပိုင်းတွင် ပြုလုပ်သည့် Melia Cohiba Hotel ၌ ကျင်းပသော ဟာဗားနားမြို့၊ မြန်မာသံရုံး ဖွင့်လှစ်သည့် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ပြီး အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ကျူးဘားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးဖွင့်လှစ်မှုသည် မြန်မာ-ကျူးဘားဆက်ဆံရေးကို အလေးထားပြီး၊ ပိုမိုမြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများလည်း ပိုမိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သံရုံးဖွင့်ပွဲသို့ ကျူးဘားနိုင်ငံ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Rogelio Sierra Diaz တက်ရောက်ပြီး အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများအပါအဝင် ဟာဗားနားမြို့အခြေစိုက် အခြားသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးအကြီးအကဲများနှင့် ကျူးဘားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာသံရုံးကို ကျူးဘားနိုင်ငံ၊ ဟာဗားနားမြို့၌ ဖွင့်လှစ်နိုင်မှုသည် မြန်မာ-ကျူးဘား နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာစေသည်သာမက ကာရေဘီယံဒေသတွင်းရှိ နိုင်ငံများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့အကြား ဆက်ဆံရေးကိုလည်း တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။